रिहा भएलगत्तै फेरि पक्राउ परेका बास्तोलालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रे लगियो! | सुदुरपश्चिम खबर
रिहा भएलगत्तै फेरि पक्राउ परेका बास्तोलालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रे लगियो!
काठमाडौँ — नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाका नेता धर्मेन्द्र बास्तोलालाई रिहा भएलगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रे पठाइएको छ । उनलाई केही बेरअघि सर्वोच्च अदालतबाहिरबाट पक्राउ गरेलगत्तै काभ्रे पठाइएको हो ।
त्यसपछि फेरि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर भएकोमा सोमबार सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्दै उनलाई छोड्न आदेश दिएको थियो । तर अदालतको आदेश पाएर रिहा भए लगत्तै प्रहरीको टोलीले लछारपछार गर्दै नियन्त्रणमा लिएर लगेको छ ।
अदालत बाहिरबाट उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा दर्ता मुद्दामा अनुसन्धान गर्न पठाइएको हो । प्रहरी स्रोतका अनुसार काभ्रेमा बास्तोलाविरुद्ध संगठित अपराधको मुद्दा दर्ता भएको थियो ।